Warshadaha Alaabada Caafimaadka - Soosaarayaasha Alaabada Caafimaadka ee Shiinaha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
La tuuro earloop laastikada ...
Qalabka ceyriinka ee maaskaro wajiga qalliinka la tuuri karo waxaa bixiya warshado soo-saar dhaqameed dhaqameed, kuwaas oo soo saara qalabka caafimaadka muddo dheer, tayadana la damaanad qaado. Iyo sidoo kale, u qalmida maaddada ee la xiriirta waxay gaarsiisan tahay heerka nidaamka maaraynta u qalmida EN14683. Gaar ahaan, qalabka dhexe waa la dhalaaliyaa 25 garaam halkii mitir oo laba jibbaaran iyo BFE (Waxtarka Fududeynta Bakteeriyada) waa 99% kor, oo ay bixiso Sinopec, oo loogu yeero dhalaalkii ugu fiicnaa ee la afuufo i ...
Shirkaddayadu waxay soo dhoofisay qalab wax soo saar xirfadeed iyo tikniyoolajiyad casri ah oo loogu talagalay soo saarista qaybta dhegaha ee laastikada ah. Waxyaabaha ceyriin ee ugu muhiimsan waa chinlon iyo spandex. Waxaan soo bandhigi karnaa band-ga dhegta dhegaha oo midabbo badan leh. Qeybtaan loo yaqaan 'loop loop' waa midab cad, ballaciisuna waa 3mm wareegsan. Waxay ku habboon tahay nooca fidsan ee wajiga lagu daboolo ee caafimaadka ama qalliinka ah. Badanaa, dhegaha dhegaha loo xirto ee wejiga daboolan, xooggiisu waa 17 N. Waxaan leenahay boorsooyin ama xirmooyin duub ah Raritaan waxaa lagu sameyn karaa hawo dhaqso leh. Wixii ...
Ujeedada iyo sharaxaadda xirmada muunad qaadashada 1. Waxaa loo isticmaalaa aruurinta iyo daabulidda hargabka kiliinikada, hargabka avian (sida H7N9), fayraska gacanta-cagta-lugta, jadeecada iyo tijaabooyinka kale ee fayraska iyo sidoo kale mycoplasma, ureaplasma iyo tijaabooyinka chlamydia 2. Fayraska iyo shaybaarka la xiriira waxaa lagu keydiyaa oo lagu qaadaa 48 saacadood gudahood xaalad qaboojiye ah (2-8 digrii). 3.Fayraska iyo shaybaarada laxiriira oo lagu keydiyey -80 digrii ama nitrogen dareere ah mudo dheer. Ogeysiis Gaara: A) Haddii kuliyada ...